Shirka McKnight ee Diiwaangelinta Neuroscience
Sidaad ogtahay, xaaladda COVID-19 ayaa si dhakhso leh isu beddeleysa; dabcan waxaan si dhow ula soconaa. Xilligan la joogo, waxaan damacsan nahay inaan horay ugu sii soconno shirka sidii loogu talagalay. Waan kula soo socodsiin doonnaa isla markaaba haddii aan go’aansanno inaan joojino ama aan dib u dhigno. Waxaan kugula talineynaa inaad ilaaliso macluumaadka xarumahaaga iyo dawladaha hoose, sidoo kalena aad la socotid boggan: